Kidnapping: Mitantara ny nanjo azy i Arman Kamis
mardi, 27 novembre 2018 22:46
24 ora taorian'ny nanavotan'ny Zandary an'i Arman Kamis teo ampelan-tanan'ireo mpaka ankeriny azy dia nanaiky nitafa tamin'ny mpanao gazety ity mpandraharaha tompon'ny Transfy ity, nilazany ny nanjo azy sy niaretany taorian'ny fitoriana ireo mpaka an-keriny azy teo anivon'ny sampana heloka be vava eo anivon'ny Zandarimariam-pirenena Toamasina.
Nambaran'i Arman Kamis fa dimy lahy nirongo basy no naka an-keriny azy tao Ampasimazava ny tolakandron'ny alarobia 21 novambra teo.
in-droa nafindra fiara izy nialoha ny nanagiazana azy tao amin'ny trano be iray tao Tsararivotra.
Nofatorana tongotra aman-tanana mba tsy ho afaka hitsoaka sy hihetsika firy.
Lehilahy efatra no mifandimby mankao amin'ny efitra nametrahana azy, ka ny roa misaron-tava.
Nisy vehivavy maromaro mifandimby manatitra sakafo aminy koa nandritra izany ka saika manao satroka sy misarom-boaly avokoa izy ireo mba tsy hahitana ny tarehiny.
Nisy olon-kafa mivezivezy tao amin'ilay trano nisy azy saingy hidiana irery ao anaty efitrano maizina ny tenany amin'ny fotoana isian'izy ireo.
Tsy afaka nihinana fanafody amin'ny maha-diabetika azy sy ny fandidiana fo nataony mihitsy i Arman Kamis nandritra izany, hany ka sahiran-tsaina sy vatana amin'ny ainy, sy amin'ny fianakaviany, ary ny daroka nahazo azy. Very 5kg ny tenany tao anatin'ny dimy andro nanagiazana azy.
Vola telo miliara Ariary no notakian'ireo mpaka an-keriny taminy sy ny fianakaviany. Ny zoma lasa teo no nanaovana ny fangatahana izay narahana sary tao anaty "clé usb" misy sarina ràn'akoho ho fampihorohorona ny fianakaviany fa raha tara ny fanomezana ny vola izay tsy nisy ady varotra mihitsy, dia ho faty ny tenany satria hoe : maratra mafy nandritra ny fihazonana azy.
Olona miisa efatra no voasambotry ny Zandary hatreto, ka ny roa sivily izay voasambotra omaly alatsinainy, andro nanaovan'ny Zandary ny hetsika, ny roa kosa androany talata izay polisy sy miaramila am-perinasa eto Toamasina avokoa izy ireo.
Nisy taratasy feno laharana finday sy nisoratra tamin'ny rindrina hita tao anatin'ilay trano. Nahitana moto scooter iray, fiara iray, sakafo ary ireo kidoro maro be ihany koa.
Mitohy ny fanadiadian'ny Zandary mikasika ny raharaha, satria mbola ho maro ireo hosamborina ; ireo telo lahy tamin'ireo tena jiolahy mpaka an-keriny tafatsoaka ihany koa dia mbola karohan'ny Zandary fatratra ankehitriny.